Gabar Muqdisho ku xanuunsaneysa oo codsatay in la caawiyo. – STAR FM SOMALIA
Colaadaha ka jiray dalka rubuc qarnigii la soo dhaafay, walina raadkooda muuqdo ayaa ka sokow geerida dadka wadkood galay natiijada ka dhalatay waxay tahay inay reebaan dhibanayaal aan dhimanoo nooleyn.
Hubka sida indha la’aanta ah loogu adeegso bulshada dhexdeeda iyadoo kuwa heysta rumeysanyihiin in isla xiisabtan maanta ama berr jiri doonin ayaa dad badan ku naafoobeen.
Ma hadhooyinka laga dhaxlay dagaalladaasi waxaa ka mida sheeko dareen leh oo heysta gabar dhallinyaro ah oo ku dhibaateysan Muqdisho.
Farxiyo Cali Cumar, waxay dhibane u tahay madfac habow ah oo ku habsaday iyadoo u halgameysa aayaheeda maadaama sida ay ii sheegtay ay ka soo carrowday iskuul ku yaalla degmada Hiliwaa ee gobolka Banaadir.
“Anigoo ah Farxiyo Cali Cumar, waxaan ku dhaawacmay madfac iiga dhacay dhabarka, kadibna waan naafoobay” ayey cod jilicsan ku tiri, Farxiyo.
Arrinta dareenka leh ayaa ah in gabadhaasi, ay qabsatay mashaqo kale, oo caafimaad kadib markii ku urursanaanta sariirta maadaama ay fadhigii gabtay ay keentay inay ku weyso xubin kale oo muhiim ah.
“Maadaama aan ka soo dagin sariirta, oo aan fariisan karin waxaa i go’day qeyb ka mida barida” ayey hadalkeeda ku dartay Farxiyo Cali Cumar.
Mudadaasi lexda sano ah, Farxiyo Cali Cumar, oo gacan ka heleysa eheladeeda waxay booqatay xarumo caafimaad oo caasimadda ku yaalla laakin bacdamaa dhaawacu gaaray xubin halis ah, waxaa adkaatay in dhaqaatiirtu ku guuleystaan daryeelkeeda.
“Isbitaallada Deyniile, Banaadir iyo kuwa kale ayaa la i geeyay waxaana dhaqaatiirtu sheegeen inaan xanuunkeyga wax looga qaban karin dalka gudihiisa” ayey tiri.
Farxiyo ayaa Muxsiniinta Somaliyeed waxay ka codsaneysaa inay gacan u fidiyaan si ay u hesho gargaar caafimaad oo dibadda ah.
Waxay sheegtay inay si naxariis leh uga codsaneyso walaalaha muxsiniinta inay ku caawiyaan sidii caafimaad dibadda ah loogu heli lahaa.
Si uu ilaahey kurbada qiyaamaha kaaga feydo, taageer gabdhan dhibban, wixii faahfaahin waxaad kala xiriiri kartaa.
WD: Abubakar Maxamed Cali..